XISBIGA UDUB OO SHIR JARAAID QABTAY UNA JAWAABAY XISBIYADA MUCAARIDKA | Toggaherer's Weblog
XISBIGA UDUB OO SHIR JARAAID QABTAY UNA JAWAABAY XISBIYADA MUCAARIDKA
Shirjaraa’id oo ay masuuliyiinta Xisbiga Udub ku qabteen Magaalada Hargaysa ayaa waxay jawaab kaga bixiyeen eedaymo mucaaridku u soo jeediyeen Xukuumada iyo Xisbiga talada haya kuwaasi oo ay ku sheegeen inay yihiin eedo aanay waxba ka jirin, xisbi ahaana ay diyaar u yihiin inay dalka doorashooyin ka qabsoomaan wax farogalina ahna aanay ku haynin Koomishanka Doorashooyinka Warsaxafadeedkaasi oo dhamaystirnaana wuxuu u qornaa sedan:-
“Waajibaadka muwaadinka reer Somaliland waxa u weyn: Adkaynta midnimada ummada, ilaalinta jiritaanka qaranka, difaaca dalka iyo diinta Waxa hadal lala yaabo ah oo xaqiiqadana ka fog war saxaafadeed ka soo baxay labada Xisbi Mucaarad ee Kulmiye iyo UCID oo ay ku edeeyeen Xukuumada iyo Xisbiga talada haya inay dib u dhigayaan doorashada loo muddeeyey 27 September 2009. Hadaba waxanu ummada reer Somaliland gudo iyo dibadba, cuqaal, culumaa’udiinba, salaadiin i wax garad, ururda bulshada,ganacsatada, saaxiibada Somaliland, deeqa bixiyayaasha iyo Beesha caalamkaba u sheegaynaa inay naga go’an tahay in doorasho xor ah oo xalaal ahi ka qabsoonto wadanka Somaliland kuna qabsoonto waqtigii loo mudeeyey oo ah 27 September 2009.
Hadaba waxanu xisbiyada Mucaaradka ka wada hadlaynay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin
• Magaacibista Guddiga anshaxa doorashada
• Ka wada tashiga Komishanka qaranka.
• Shuruudaha Deeq bixiyayaashu ku xidheen doorashada
Mawqifka Xisbiga UDUB:
1. Waxanu soo jeedinay in guddiga anshaxu ka yimaado lagana soo xulo qaybaha kala duwan ee Bulshada riyidka ah, Culimada, haweenka,
dhallinyarada, aqoon yahanka, oo lagu soo xulo inay yihiin dad aan ka tirsanayn xisbiyada (Non partisan) ayna soo xushaan Komishanka qaranka oo u xilsaaran doorashooyinka. Waxanu kale oo soo jeedinay in la xoojiyo guddiga anshaxa ee hore u jirey, lana kordhiyo haddii laga maarmi waayo.
Halka Xisbiyada mucaaradku soo jeediyeen in laga soo xulo Xisbiyada tartamaya mid kasta 3 xubnood, lana kala diro guddiga anshaxa ee hore u jirey.
2. Gudiga doorashooyinka in la xoojiyo awoodooda,
Anaga oo ka duulayna xeerarka wadanka iyo in komishanku yahay hay’ad madax bannaan oo aanu xisbina xaq u lahayn inuu fara geliyo, rabitaankiisana ku bedelo xubin ka mida ah xubnaha komishanka. Ka dib markii ay cabasho iyo kalsooni darro ay ka muujiyeen xubnihii ay hore u soo xusheen xisbiyada mucaaradku, ayaanu soo jeedinay anagoo
tixgelinayna cabashadooda inay soo qanciyaan xubnahooda ay qawadsan yihiin ee ay doonayaan inay bedelaan. Anaguna aanu xubin ku soo qancino in la bedelo oo ka mid kuwii xukuumadu keentay.
Halka xisbiyada mucaaradku soo jeediyeen in lagu kordhiyo 4 xubnood taas oo aan waafaqsanayn xeerka uu ku fadhiyo Komishanka Doorashada oo tiradiisu ku xadidan tahay 7 xubnood, iyada oo aanu u aragnay in lagu carqaladaynayo in doorashadu ku qabsoonto waqtigeeda.
3. Shuruudaha Deeq Bixiyayaasha:
Waanu u mahad celinaynaa deeq bixiyayaasha naga caawinaya inay qabsoonto doorasho xor ah oo xalaal ah, tala soo jedintoodana waanu tixgelinaynaa, ilaa iyo inta aanay ka horimanayn shuruucda dalka,
karaamada iyo nabad gelyada ummadda Somaliland. Xukuumada waa ka diyaar inay bixiso saamiga kaga aadan kharashka doorashooyinka oo ah 25%. Waxana waxba kama jiraan ah in Xukuumada iyo xisbiga talada hayaa dal badeen in wadanka laga saaro hay’adda interpeace oo taageerta komishanka qaranka.
Waxa beryahan 3 da Xisbi qaran u socday wada hadalo lagaga xaajoonayey qodobada kor ku xusan oo meel wanaagsan noo marayey, kuna dhowaa heshiis dhammays tiran. Nasiib darro maalintii loo ballansanaa in qalinka lagu duugo heshiiskaas oo ahayd 15 June 09, ayey noo sheegeen inay ka baxeen wada hadalkii, shir jaraa’id oo ay qabteen gelinkii danbena waxay ku burburiyeen rajadii laga qabay in heshiis la gaadho.
Waxanu u soo jeedinaynaa xisbiyada Mucaaradka Kulmiye iyo UCID inay ka waantoobaan masabidaada raqiiska ah iyo muranka aan dhammaanayn ee keenaya waqti lumis iyo carqaladayn ku timaada doorashooda Inay qabsoonto 27 September 2009
Xisbiga UDUB waxu mar walba diyaar u yahay wada tashi iyo isu tanaasul waafaqsan shuruucda iyo danta guud ee qaranka.
Xisbiga UDUB waxu ku guubaabinayaa shacbiga Somaliland inay u diyaar garoobaan doorashada dhacaysa 27 September 2009, kana digtoonaadaan waxii abuuraya fadqalalo ama ka hor imanaya inay doorashadu qabsoonto waqtigeeda. Shacbiga Somaliland waxa horyaal inay doortaan hogaankooda si xor iyo xalaal ah, kuna codeeyaan nabad iyo deganaansho si loo gaadho himilada aqoonsi ay higsanayaan.”